Cidamo Kenyaan ah iyo kuwa DFKM oo qabsaday degmada Buurgaabo
October 28, 2011 - Written by
Kismaayo:-Ciidanka dowlada Kenya oo gacan siinaya kuwa Soomaali ah ayaa waxaa ay dhawaan la wareegeen degmada Buurgaabo oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose.
Ciidanka dalka Kenya ayaa waxaa ay ku hubaysan yihiin hubka noocyadiisa kale duwan iyagoo dhinac cirkan ay ka taageerayaan diyaarado waxayna duqeyn culus ka geysteen Degmada Buurgaabo iyo Deegaanka Caanoole
Ciidanka ururka Al-shabaab ayaa dib uga gurtay degmada Buurgaabo waxaan ay ciidama dooda u qaybiyeen kooxo yar yar si ay uga fogaadaan in diyaaraduhu ay bartilmaamsadaan saldhiyada ay ku sugan yihiin iyo hubka Tiknikada ah ee ay wataan.
Ciidamada DFKM iyo Raaskaambooni ayaa hadda ku sugan degaanka Buurgaabo halka ciidanka Kenyaanka ah ee ku saaciday dagaalkana ay ku sugan yihiin duleedka degaanka Buurgaabo oo 140 KM dhanka Xeebta kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose.
Ciidanka Al-shabaab ayaa xalay jidgooyooyin u dhigay ciidanka dalka Kenya oo marayey deegaanka Jaandisho, oo ah duleedka deegaanka Taabta iyadoo lagu soo waramayo in weerarkaas uu khasaaro lagu gaarsiiyey ciidanka dalka Kenya.
Warka oo faahfaahsan dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allaahu